Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga Dalka, ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga Dalka, ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Muqdisho
Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo gaarayay 20-sarkaal ayaa maanta tababar loogu soo xiray magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada tababarada ciidanka ee Deegaanka Jaziira.
Munaasabadii tababarka loogu soo xiray saraakiishan ayaa waxaa ka qeybgalay Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya S/Gaas Maxamed Aadan Axmed, saraakiisha howlgalka Midowga Yurub ee tababarka Ciidanka xoogga , AMISOM iyo saraakiisha qeybaha hoggaanada Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya.
Taliyaha howlgalka Midowga Yurub ee tababarka Ciidanka Soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in Midowga Yurub ay ka go’an tahay taakuleynta ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo sidoo kale balan qaaday in mudooyinka soo socda ay kordhin doonaan taageerada dhanka tababarka ee Ciidanka.
Sareeyo Gaas Maxamed Aadan Axmed Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u mahadceliyay Midowga Yurub iyo AMISOM kaalinta ay ka qaadanayaan tababarka iyo qalabeynta Ciidanka Xoogga, waxaana uu saraakiisha tababarka dhameystay ku adkeeyay in ay ka faa’ideeystaan xirfadihii ay barteen.
“Waxaan u mahad-celiyaan cid walba oo gacan ka geystay tababarka aad qaadateen, waxa la idinku soo xushay ee maanta la idiin saaray mas’uuliyadaas weyn waa difaaca dalkiina Hooyo. Maanta laga bilaabo waxaad tihiin saraakiil ka tirsan Xoogga dalka Soomaaliyeed, waana in ay idinka muuqataa masuuliyadaas idin saaran” ayuu yiri Taliyaha oo ka hadlayay Munaasabadda.
Ugu danbeyn, Saraakiisha Tababarka loo xirey ayaa waxaa shahaadooyin guddoon siiyey Taliyaha Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed S/Gaas Maxamed Aaden Axmed, wuxuna ugu hambalyeeyey sida wanaagsan ee ay uga soo dhalaaleen tababarkii la siiyey, isagoo u rajeeyey guul iyo horumar.
Ra’iisal Wasaare Sharma’arke oo booqday xeryaha qaxootiga Dhadhaab
Maamulka Galmudug ayaa maamul KMG ah u magacaabay degmada Caabudwaaq ee waqooyiga Galgaduud